Olee otú Record ihuenyo Arụ Ọrụ na Sound
> Resource> Record> Record ihuenyo Arụ Ọrụ na Sound
Ị pụrụ ịhụ ya bụ ike idekọ ihuenyo ọrụ na n'otu oge tinye ụda olu. Ma ugbu a, na DemoCreator - a dị ike ma dị mfe ihuenyo edekọ omume, ị nwere ike mfe ike a akomako dabeere screencast na ala. N'ebe a, anyị ga-amụta otú e si eji DemoCreator si elu audio ike ịgbakwunye na dezie audio gị screencasting fim.
Nke a na ihuenyo edekọ enye 3 ụzọ ka ịgbakwunye audio na ihuenyo tepụ. Họrọ a usoro-amasị gị:
Usoro 1: Record audio na kpọọ oge
Usoro 2: Record audio na preview oge
Method 3: Import ọdịyo faịlụ
Record ihuenyo ọrụ na ụda n'otu oge.
Launch DemoCreator na họrọ ndekọ ebe na ndekọ mode, tupu ị malite Ndekọ ihuenyo ọrụ, ị nwere ike na-eme otú audio ntọala idekọ akomako n'ihi na gị video ngosi.
E nwere 3 audio isi mmalite na-ahọrọ: Igwe okwu, baraaka Mix, na N'azụ Input. Họrọ Igwe okwu dị ka ọdịyo ndekọ ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịdekọ ihe ị na-ekwu; ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịdekọ ihe ị na-anụ site na kọmputa ma ọ bụ ọkà okwu, ị nwere ike họrọ PC ọkà okwu dị ka ndekọ isi iyi; ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịdekọ ihuenyo audio site na ụfọdụ ndị ọzọ akụ, jikọọ ọdịyo na ngwaọrụ na N'azụ Input n'ọdụ ụgbọ mmiri na ịtọ ọdịyo ndekọ nhọrọ dị ka N'azụ Input.
Site na ịpị Igwe okwu icon, ị nwere ike ịga iji nwalee ọdịyo ndekọ ngwaọrụ ego na ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ.
N'ihi na okwu: Gwa okwu na ị ga-ahụ audio uche larịị Ọ bụrụ na ndekọ na ngwaọrụ na-arụ ọrụ.
N'ihi na PC okwu: Play a mpempe music na kọmputa gị na ị ga-ahụ audio uche larịị Ọ bụrụ na ndekọ na ngwaọrụ na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na e nweghị nsogbu na ndekọ ngwaọrụ, pịa Record bọtịnụ na-amalite gị ndekọ.
Cheta na: Kasị ihuenyo ndekọ nwee ọrụ idekọ na kọmputa na ihuenyo ọrụ na ọdịyo. Otú ọ dị, mmekọrịta nke ọdịyo na video bụ n'ezie a nnukwu nsogbu. Dị ka video na ọdịyo egwu na-adịghị ikewapụ ọ bụla ọzọ, cropping a video clip na usoro iheomume pụtakwara mgbutu anya gị akomako tinyere na ya. Nke ahụ agaghị abụ ihe ị chọrọ. Ma ọ bụ ọ bụrụ na gị dere screencast dị mma, ma e nwere ihe na-ezighị ezi na gị akomako, ị ga-Malitegharịa ekwentị gị akomako na ndekọ screenshots ruo mgbe ị nwetara ya ziri ezi. Ya mere, na atụmatụ nke Ndekọ akomako mgbe ihuenyo ndekọ pụrụ ịbụ ihe irè ngwọta na-eme ka ndị gbara ọkpụrụkpụ screencast.
Ọ bụrụ na ị bụghị afọ ojuju ma ọ bụ gị mkpa ime mgbanwe ụfọdụ na audio i dere tinyere gị screencast, ị nwere ike ịdekọgharịa ọdịyo mgbe Michael ndị ahụ e dere screencast na wuru na-audio nchịkọta akụkọ.
Pịa Audio bọtịnụ na ị nwere ike ịga ọdịyo nchịkọta akụkọ.
Tupu gị ọdịyo ndekọ, ị nwere ike pịa Ntọala icon iji họrọ ma nwalee ọdịyo na ngwaọrụ.
Họrọ nke nke slides ị chọrọ ka ịdekọ akomako na, na pịa na Record button na ala nke Audio Editor na i nwere ike na-amalite gị ọdịyo ndekọ. Iji mee ka gị akomako mmekọrịta na nkiri, ị nwere ike ịlele dere nkiri synchronously na-eme ndị ndekọ olu.
Mgbe ọ bụ n'elu, pịa Kwụsị bọtịnụ.
Pịa Play button ele ndị ahụ e dere nkiri na ọdịyo. Ọzọkwa ọzọ, ị nwere ike gbanwee akomako na edezi ngwaọrụ (dị ka ihichapụ na fanye nkịtị) na audio nchịkọta akụkọ.
Method 3: Import ọdịyo faịlụ na ọdịyo nchịkọta akụkọ
E wezụga nke abụọ ụzọ e kwuru n'elu, ị nwere ike mbubata ọdịyo faịlụ na ihuenyo ndekọ dị ka ndabere music.
Back to ọdịyo nchịkọta akụkọ, e nwere otu Import button n'ihi na ị ka ịgbakwunye chọrọ music faịlụ site ị Obodo disk.
Mgbe ndekọ dị n'elu, i nwere ike ịhụ ọdịyo faịlụ nke MP3 format na oru ngo nchekwa.
Ya mere, dị nnọọ ike gị olu-ihe karịrị akomako screencast na DemoCreator!